हातखु’ट्टा घिसार्दै जी’न्दगी ल’तार्ने शा’रदाको संघर्ष – कस्ले सुनिदेला, कस्ले बुझिदेला ? – AB Sansar
October 5, 2020 adminLeaveaComment on हातखु’ट्टा घिसार्दै जी’न्दगी ल’तार्ने शा’रदाको संघर्ष – कस्ले सुनिदेला, कस्ले बुझिदेला ?
शारदा शर्मा – आज भन्दा ७ बर्ष अगाडि ! तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रुकुमको प्राङ्गणमा केटीहरुको भिडभाडको बिचमा देखिएको एउटा विचित्रको दृश्यले मेरो ध्यान तान्यो । दुबै हात जमिनमा टेकेर पुरै शरीर लतार्दै, घिर्सिदै हिड्ने मानिसको त्यो अवस्थाले मेरो मात्र हैन धेरैको ध्यान खिचिरहेको थियो । असह्य शा रिरीक पी डा बोकेर शरीरलाई ढुंगा र माटोमा लतार्ने भविष्यका सूनौला सपना बोकेर जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोट आएकी थिईन,उनी अर्थात २६ बर्षीया शारदा शर्मा । *******थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’***,
संकटका आधी हुरी निरन्तर आईरहेपनि संघर्षको यात्रा सकिएको छैन । पीडाका आधिबेरीले बारम्वार उनका खुसिहरुलाई ढाकिदिएका छन् । पारिवारिक विछोडसंगै वषौ देखि भोग्दै आएको गरिवी, अभाव र शारीरिक समस्या नजिकै बसेर सुनेर उनलाई साहस र थप हौसला थपिदिने मेरो चाहना अहिलेको लकडाउनले सम्भव हुन दिएको छैन । शारदासँग भेट्न र संकटमा केहि सहयोग गर्ने मेरो योजना पनि यो लगडाउन चुनौति बनेको छ । पीडाको पहाड बोकेर बाँचेकि उनको यो ब्यधा र बाध्यता सुनिदिने र बुझिदिने मनहरुले उनलाई केहि त सहयोग गर्न सकौला नि ? साभार -हाम्राखबरबाट